Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya oo ka hadlay howl galada ka socda Shabellaha Hoose – idalenews.com
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaa soo dhoweeyay guulaha ciidamada xooga dalka ka gaareen howl galada ay ka wadaan qeybo ka mid ah gobolka Shabellaha Hoose, kadib markii shalay ay la wareegeen deegaano dhowr ah.
C/xakiin Fiqi oo wareysi siiyay Idaacada afka dowladda ku hadasha ee Radio Muqdisho ayaa sheegay in howl galada ujeedkooda yahay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan.
“Waxaan ugu hambalyeynayaa geesayaasha Ciidamada qalabka sida guulaha ay soo hoyeen, kooxihii nabad diidka ahaa waa kala firxadeen, dhowaan waxaa rajeyneynaa inay gaareen deegaano badan”ayuu yiri Fiqi.
Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay inay dhowaan isku furi doonaan wadada isku xirta Baydhabo iyo Muqdisho, isagoo ka dhawaajiyay inay socdaan qorshayaasha ku saabsan isu furida wadadaas.
Wasiirka Gaashaandhiga ayaa sheegay in deegaanada ay la wareegeen Ciidamada ee Janaale, Awdheegle iyo tuulooyinka kale ay muhiim ugu tahay inay ugu sii gudbaan deegaanada kale ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Ciidamada xooga dalka iyo kuwa AMISOM ayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan ka wada qeybo ka mid ah Gobolka Shabellaha Hoose, iyadoo ciidamada ay ku wajahan yihiin degmada Khoryooley iyo deegaano kale.